Fixed Zawgyi Keyboard For Ubuntu 8.10 - Saturngod
Posted on Updated November 10, 2008 November 7, 2008 by saturngod
ကဲ… ပြန်ပြင်ပြီးပါပြီ။ 8.04 နဲ့ 8.10 မှာ နေရာလည်း နဲနဲပြောင်းသွားတာကြောင့် ပြသနာတွေ ဖြစ်ကုန်တာပါ။ အခုတော့ အားလုံး အဆင်ပြေသွားပါပြီ။
တကယ်လို့ package အဟောင်းသွားထားမိရင်
$sudo apt-get remove zawgyi-keyboard
နဲ့ ပြန်ဖျက်လိုက်ပါ။ ပြီးမှ ဒီဟာ ကို download ချလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ Terminal မှာ
ကို run လိုက်ရုံပဲ။
အဲ extract လုပ်ထားတာက Desktop ပေါ်က Zawgyi ဖြစ်နေတယ်ထားပါစို့။
ဒါဆိုရင် Terminal မှာ
ဆိုပြီး လုပ်ရမှာပေါ့။ security ပိုကောင်းသွားတဲ့အတွက် ပိုခေါင်းစားသွားရတာပါ။
« Alpha က အလုပ်ခေါ် Making DEB package »
I think the link is broken. When clicked, display page not found.
ပြန်ပြင်ထားပြီးပါပြီ။ http://www.mysteryzillion.org ဖြစ်သွားလို့ပါ။ link ကို အရင်ကလို .com ပေးထားမိလို့ပါ။
Cool! ဒါကို စောင့်နေတာဗျ 🙂
ကို Saturn , လေးအောက်ကို အင်္ဂလိပ်ကနေ မြန်မာကို ပြောင်းပြီးသွားရင် ပြန်ပြောင်းလို့ မရတော့ဘူး ဖြစ်နေတယ်ဗျ။ Ctrl + Shift လို့ပေးထားပေမယ့် US > MM မှာ ပြောင်းလို့ရပြီး MM ဖြစ်သွားရင် US ကို ပြန်မပြောင်းဘူး။ ကလစ်သွားပြီး နှိပ်ပေးနေရတယ်။ ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမလဲ။
အဲ… Ctrl+Shift က တစ်ခုပဲပြောင်းလို့ရတယ်ဗျ… ဒါကြောင့် ကျွန်တော်က left alt ကိုပြောင်းပြီး အသုံးပြုရတာ…
ဟုတ်ကဲ့.. အခုတော့ ကျန်တော်လဲ ဝင်းကီး နဲ့ပဲ ချိန်းနေယ်။ Ctrl + Shift ရရင်တော့ ပိုပြီး အဆင်ပြေမယ်ဗျ။ ဟိုဖက်မှာ သုံးနေတာက အကျင့်ဖြစ်နေပြီ =D
anyway, good job! Thx 🙂
I can’t type words from –> s to ; <– in myanmar. There is no problem with the others. I use the Ubuntu 8.10. Everything is okay in 8.04.
stoe ရေ… တကယ်လားဗျ… စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ… ကျွန်တော်အခုလုပ်ထားတာက Ubuntu 8.10 ဆိုတာထက် Gnome2အတွက် deb package ပါ။ တကယ်လို့ Gnome2သေချာတယ်ဆိုရင် download ပြန်ချပြီး သွင်းကြည့်ုလိုက်ပါ။ အဲ.. အရင် package အဟောင်းကိုတော့ remove လုပ်အုံးနော်.. ဒါမှအဆင်ပြေလိမ့်မယ်။
When I install the Zawgyi.deb , it was shown error. pls
What error message show ?
ဆယ်ခါလောက်လုပ်မှမဆင်ပြေတယ် ကိုကြီးရေ ကျေးဇူးတော့ အများကြီးတယ်တယ်ဗျာ တကယ်ပဲ ဒါပေမဲ့ ကီးဘုတ်နဲချိန်းတာတော့ လုပ်လို့မရဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲသမိဘူး
(အဆင်ပြေသွားပြီဗျို့) ကီးဘုတ်ကို Ctrl+Shit နဲ့ ပြောင်းလို့မရတဲ့သူများ Third level choosers မှာ ဘာမှမတက်ပဲ အကုန်ဖြုတ်လိုက် ပြီးတော့ layout switching ဆိုတဲ့နေရာမှာပဲ LCtrl+Shit change layout. ဆိုတာရှိတယ် အဲ့ဒါကို သာကလစ်လုပ်လိုက် ပြီးရင် စမ်းပြောင်း စမ်းရိုက်ကြည့်စေဗျာ အားလုံးအဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ရိုက်လို့ရပါပြီ
ကျွန်တော် ပြန်ပြင်ထားပြီးပါပြီ။ ဒါပေမယ့် upload တော့ မတင်ရသေးဘူးဗျ။
ကျေးဖူးပဲဗျာ ကျနော် ဇော်ဂျီကို Ubuntu မှာ ဘယ်လိုသွင်းရမှန်းကိုမသိဘူး။
Linux အတွက် ဘာတွေ ဖက်ဖို့ လိုလဲလို့ နည်းနည်းပြောပြပါလား။
Online မှာ Free ရတာလေးတွေဆို ပိုကောင်းတာပေါ့ ….
how can i download only burma fonts in ubuntu 9.0.4 .i dont want to use burma keybord cauze we are using swedish keybord, i want to download all myanmar fonts in ubuntu to read all myanmar web abd learn .what are the different myanmar unicode3and zaw gyi and other burma font?
what is the really burma unicode font?
Ubuntu 9.04 new version….. I need to download and I also need to test with current my keyboard. I think it’s can be install. what problem occur ?
I haven’t installed your font yet but definitely will try after this post.
I have upgraded mine from 8.10 to 9.04.
faster, nicer, and compiz fusions effects are very smooth and faster than 8.10
just give itatry bro.
once again, thanks for your font package
When I tried to install this, i got this error in Buntu 9.04
[email protected]:~/Desktop$ sh install.sh
Selecting previously deselected package zawgyi-keyboard.
(Reading database … 291843 files and directories currently installed.)
Unpacking zawgyi-keyboard (from Zawgyi.deb) …
Setting up zawgyi-keyboard (1.3.1) …
/usr/share/menu/zawgyi: 1: Syntax error: word unexpected (expecting “)”)
Execution of /usr/share/menu/zawgyi generated no output or returned an error.
it’s not error… you can add keyboard with keyboard indicator in Panel
Hi, ubuntu sayar gyi Ko Saturn yay……………..,
I just installed ubuntu 9.04 but I can’t put zaw gyi keyboard.. please help……………………….
I can’t type myanmar fonts.
I downlad with ur link. but its ask for username and pw
I can’t download……….. :'( wah wah wha.. :'(
its that driver can use for 9.04 as well?
thank you for your time and your contribution to open source community .
ကျေးဇူးပါဗျို့ အခု ubuntu 9.04 ကနေ မြန်မာလို ရိုက်နေပါတယ်
Myat Htet says:
အခု ubuntu 9.10 အတွက်ရော အဲ့ဒါနဲ့အဆင်ပြေမလား အစ်ကို ။
http://code.google.com/p/zawgyi-keyboard/ အဲမှာ ရှိပါတယ်။
အကို အချိန်ရရင်ပေါ့ ဘယ်လို zawgyi keyboard.deb လေးတွေရေးတယ် လုပ်တယ်ဆိုတာလေးတွေ သိချင်လို့ပါ အညွန်းရှိရင်းလည် ပေးပေါ့ အကိုရေးမယ်ဆိုရင် စောင့်ဖတ်မယ်
python သုံးဗျ.. အဲဒါက installation လုပ်ရတာ လွယ်တယ်။ http://code.google.com/p/zawgyi-keyboard/ အဲမှာ zawgyi keyboard download ချပြီး mm file လေးကို အစားထိုးလိုက်ရုံပဲ။ deb လုပ်တာထက် လွယ်တယ်။
ကျွန်တော် Ubuntu server 10.04 LTS ကိုစမ်ကြည့်ပါတယ်….
webmin ကိုသုံးထားပါတယ်…ဒါပေမဲ့ …file share အတွက်လည်း အဆင်ပြေပါပြီ…
တစ်ခု က …webmin ကို ဘယ်လိုဆက်သွားရမလဲနားမလည်တော့ပါဘူး…ခင်မျာ..
ဆိုလိုတာ က … ကျွန်တော် webmin ကို management ကောင်းကောင်းမလုပ်တတ်ဘဲဖြစ်နေပါတယ်… ကျွန်တော် က လောလောဆယ် local မှာ ပဲ စမ်းကြည့်ပါတယ်…မဖြစ်မနေ လုပ်ရမဲ့ server ပေါက်စကလေး လုပ်စရာရှိနေလို့ ..သိပ်နားမလည်ဘဲ လုပ်နေရတော့ ရှေ့မရောက်သလိုဖြစ်နေပါတယ်…php5 ,apache2.2 , phpmyadmin စတာတွေလည်း အားလုံး ပြီးပါပြီ…webmin ကနေ ဘယ်လို domain name တည်ဆောက်မလဲ …အခွဲပေါ့ …နောက်တစ်ခု က …publish_html ဖိုင်ကို ဘယ်လို ပေါ်အောင်လုပ်ရမလဲ … ကျွန်တော်တို့ hosting server တစ်ခု ကနေ hosting ..domain ဝယ်ခဲ့သလို မျိုးပေါ့ …အဲလိုတွေ အစဉ်တစ်ကျ ဖြစ်အောင် ဒီ webmin နဲ့ ဘယ်လို စခန်းသွားရမလဲ မသိတော့လို့ပါ…
အီးမေးလ် ဖြစ်ဖြစ် …. ဒီအတွက် Ebook ကောင်းကောင်းလေး ဖြစ်ဖြစ် ပို့ပြီး ကူညီပေးပါအုံးခင်မျာ…
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုစေတန် ကြီးခင်မျာ…
for me , just use google. I don’t know webmin and I did myself for setup hosting. I just using google. If you want to more detail, ask in http://www.mysteryzillion.org
ကျုပ်တော့ ဝဋ်လည်ပြီး 😀 ….
ကျေးဇူးပါ ကိုစေတန် ခင်မျာ..
Alpha က အလုပ်ခေါ်